NRNA मा गर्नेलाई भन्दा देख्ने लाई लाज कहिले सम्म ? - Enepalese.com
महेश भट्टराई २०७६ वैशाख ५ गते २१:२१ मा प्रकाशित
मेरो निर्बाचन कमिटीलाई अनुरोध र चुनौती : ५०१c संस्थाको खोल ओडेकै भरमा जन संपर्क र प्रवासी मंचले नेपालको खुल्ला राजनिती गर्न पाइन्छ ? घर्म, जाती, क्षेत्र, लिंगको राजनिती गर्न पाइन्छ ?
वा जन संपर्क र प्रवासी मंचले नेपालको राजनिती गरेको छैन भनेर प्रमाण दिन सक्छ ???
कि By laws मिच्ने अधिकार उनिहरू लाई मात्र छ ? वा बिधान देखाउने दात हो ?
Nrn मा गर्नेलाई भन्दा देख्ने लाई लाज कहिले सम्म ?